Dabbaaldegga Maalinta Haweenka Dunida - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: SVT Bild.
Dabbaaldegga Maalinta Haweenka Dunida
Publicerat fredag 8 mars 2013 kl 12.31
Maanta waa maalinta haweenka adduunka, waana maalin looga soo dabbaaldegi jirey qaybo ka mid ah dunida ilaa iyo dagaal koowaad ee dunida.
Waxaa sannadkii 1977 maalinta haweenka adduunka looga aqoonsaday Qaramada Midoobey in ay tahay maalin laga xuso. Maalinta haweenka waxaa siyaabo kala duwan looga dabbaaldegaa dunida dacalladeeda, taas oo ku xiran hadba dalka lagu nool yahay. Aqoonisweydaarsi ku saabsan xuquuqda haweenka iyo bannaanbaxyo ayaa maanta lagu qabanayaa dalkaan Iswiidhen. Waxyaalaha la soo bandhigayo waxaa ka mid ah buug loogu magacdaray ”Brudarnas årsbok” oo ay soo saareen haween sawirqaadayaal. Waxaana mashruucaan soo qabanqaabiyey Mahshid Rasti.
Waxaa ka soo qaybqaatay 42 dumar oo middiiba ay soo diyaarisay saddex sawir. Waxaana lagu soo ururiyey sawiro badan oo aad u kala duwan. Sawirqaadayaashuna waxay isugu jiraan kuwo qaada sawirada xayeesiiska iyo kuwo qaada sawirada saxaafadda. Waxa qura oo ka dhexeeyaana waxa weeye in ay yihiin dumar iyo sawirqaadayaal.
Sida ay sheegeyso Mashid Rasti ujeeddada ka dambeysa mashruucu waxa weeye in dumarka sawirqaadayaasha ahi ay dhexmuuqdaan qaybtaan xirfadda raggu ku badan yahay. Rasti waxay kaloo sheegtay in maalinta haweenka dunida looga baahan yahay, xataa bulsho dimoqraadi ah sida tan iswiidhishka.
In aynnu nahay dad ku dhaqma oo ku nool dal dimoqraadi ah micneheedu ma aha in aynnaan ahayn bulsho raggu ka taliyo. Iswiidhen waa dal raggu ku awood badan yahay. Haddaba aad ayey muhiim u tahay in bulsho raggu ku awood badan yahay la is xusuusiyo haweenka iyo xuquuqdooda.
Waxaa wareystay Zinat Hashemi.
Waxaa isku soo dabariday Kris Boswell